သားလေးရဲ့နာရေးမှာရတဲ့ ကူငွေတွေအားလုံး သုံးလို့ကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကို သက်သေနှင့်တကွချက်ကျလက်ကျရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင် – Cele Lover
သားလေးရဲ့နာရေးမှာရတဲ့ ကူငွေတွေအားလုံး သုံးလို့ကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကို သက်သေနှင့်တကွချက်ကျလက်ကျရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကြီးမှားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။နာမည်ကြီးလူငယ်တေးသံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရေမွန်ဟာ အခန့်မသင့်ပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ချိန်ဟာ စောသေးတာဖြစ်တာကြောင့် သူ့မိသားစုဝင်သူငယ်ချင်းတွေသာမက တစ်နိုင်လုံးကပရိသတ်တွေကပါ ဝမ်းနည်းမဆုံးဖြစ်နေရတာပါ။ကွယ်လွန်သွားတာ ကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ့် ယနေ့အချိန်ထိ မိသားစုတွေ၊ချစ်ရတဲ့သူတွေက ယနေ့အချိန်ထိလွမ်းဆွတ်တမ်းတနေကြတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ခုမှာတော့ အမေဖြစ်ဟာ သားဖြစ်သူအခန်းလေးကို တစ်ချိန်ပြခန်းလေးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ရင်းအခက်အခဲလေးတွေကိုခုလိုဝေမျှထားတာပါ။ တွတ်ပီမဆုံးပါးခင်(၄)နှစ်ကျော် ခေတ္တငှားရမ်း ခိုနားခဲ့တဲ့အခန်းလေးဟာ နှစ်စဉ် May 19 မှာစာချုပ်အသစ် ပြန်ချုပ်ရပါတယ်.အခန်းလေးကတော့မြင်ကြတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းလိုအပ်ချက်တွေ၊မပြည့်စုံမှုတွေများပေမဲ့အိမ်ငှားဘဝနဲ့မကြာခဏပြောင်းရွှေရထုတ်ပိုးရ ဒုက္ခတွေကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေ တတ်နိုင်သမျှ ကြိတ်မှိတ်သီးခံပြီးသူနေသွားခဲ့တာပါ.ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာ တစ်သက်တာလုံးနေဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိလောက်ပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့ ထွက်ခွာမှာပါဘဲ.နောက်တစ်ချက်ကတော့..May 19 ရက်နေ့အတွက်အိမ်ရှင်ကMay 16-2021 မှာအကြောင်းကြားလာတော့လောလောဆယ်အဲ့အချိန်က ပြန်လာပြီးကျသင့်ငွေရှင်း၊စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဖို့လုံးဝအဆင်မပြေတာကြောင့်အိမ်ရှင်ကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ လက်မခံဘဲပိုက်ဆံသာတွင်တွင်တောင်းနေတာကြောင့်သားအမိ သုံးယောက်(ပိုပိုးအပါ)အန္တရာယ်လမ်းခရီးရ‌အောင်ပြန်ဆင်းပြီးစာရင်းရှင်းတဲ့အချိန် ကျန်ခဲ့တဲ့ တွတ်ပီဆုံးပါးခဲ့ရတာပါ.
သူ့ကို အချိန်ပြည့်အရိပ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အမေသာ အတူရှိနေခဲ့ရင် ဒီလိုအဖြစ်‌ဆိုးမျိုးပေါ်ပေါက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအိမ်စာချုပ်ကိစ္စ အိမ်ရှင်ကအချိန်တစ်ခုထိ စာနာသီးခံပြီးစောင့်ဆိုင်းပေးခဲ့ရင်လဲရန်ကုန်ကို အလောတကြီးပြန်ဆင်းဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။စာနာစိတ်မထား၊ပိုက်ဆံသာတွင်တွင်တောင်းခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်နဲ့(ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ)ထပ်မံမပတ်သက်ချင်၊တွတ်ပီပြခန်း‌အဲ့အခန်းမှာမဖန်တီးချင်တဲ့ မိသားစုရဲ့(အထူးသဖြင့်…သားဆုံးရှုံးထားတဲ့အမေ)ခံစားချက်ကို တွတ်ပီရဲ့ချစ်သောပရိတ်သတ်တွေ၊fan တွေ၊အပေါင်းအသင်းတွေ စာနာနားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့. .မျှော်လင့်ပါတယ်တွတ်ပီဆုံးပါးပြီး အလှူငွေထည့်ဝင်ကြရာမှာ..ထွက်သွားသူအတွက်တစ်ချို့ကရည်စူးပြီး တစ်ချို့ကတော့အားကိုးရာမားမားမတ်မတ်သားကြီး ဩရသမရှိတော့တဲ့ကျန်ရစ်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှူဒါန်းခဲ့ကြတာမို့. .တစ်ချို့ကို..သွားလေသူအတွက် လစဉ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းပေး‌နပါတယ်တစ်ချို့ကို..တွတ်ပီရဲ့ယုံကြည်ခဲ့ရာ၊ဆန္ဒရှိခဲ့ရာတွေကိုလှူနေကူနေပါတယ်အလှူငွေထဲကတစ်ချို့(အနဲငယ် နိုင်သလောက်)
(အတိအကျဆိုရရင် 68 သိန်းကျပ်)ကို တွတ်ပီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူ့ Band member တွေအတွက်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်(Band manager မှတဆင့်သက်သေထား၍)ကျန်တစ်ချို့ကိုကျန်ရစ်သူမိသားစုစားဝတ်နေရေး(အဓိက..နေရာထိုင်ခင်း)အတွက်သုံးစွဲပြီးကျန်ငွေကို ရှေ့ဘာတွေဖြစ်လာမှန်းမသိနိုင်တဲ့အနာဂတ်ခရီးကြမ်းကြီးအတွက်စုဆောင်းသိုမှီးထားရပါတယ်တွတ်ပီဆုံးပါးစကာလမှာထဲကသူ့အမှတ်တယပြခန်းလေးအတွက်သီးသန့်လှူဒါန်းလိုသူများဆက်သွယ်လာတော့ ခေတ်ပျက်ထဲစားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းနေကြသူအများစုကို စာနာစိတ်နဲ့ အလှူငွေလက်မခံခဲ့ပါ၊ အိမ်ငှားကာလလဲပြည့်ဖို့လိုသေးတာမို့နီးတော့မှဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့တာပါခု. (19.5.22)ဆိုစာချုပ်သက်တမ်းပြည့်တော့မှာမို့အရင်ထဲကလှူဒါန်းဖို့ ဆက်သွယ်ထားသူတွေကို အကြောင်းကြားတဲ့သဘောပါဘဲ.လောဘတက်ပြီး ရသလောက်အမြတ်ဘဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲနဲလေးတောင်မရှိပါRaymond (Idiots)ကိုမွေးထုတ်၊သင်ကြား ဆုံးမခဲ့တဲ့ အမေမို့ Raymond လိုဘဲ လောဘသက္ကာရနည်းပြီး မွဲတေနေပါကြောင်း(လှူထားတဲ့ငွေတွေကုန်ပြီလား၊ဘယ်ရောက်သွားလဲ)သိချင်သူ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်လက်သစ်များကိုပြန်ကြားအပ်ပါတယ်.
တစ်ဆက်တည်းသိစေချင်တာကဒီအစီအစဉ်အတွက်ပါဝင်လှူဒါန်းသည်ဖြစ်စေ၊စေတနာပျက်သွားလို့/တွတ်ပီကိုဦးနှောက်ထဲမရှိတော့လို့/သွေးအေးသွားလို့ မလှူဒါန်းတော့သည်ဖြစ်စေ သူ့ကိုမြဲမြဲမြံမြံချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့Forever Real Fan တွေ၊ပရိတ်သတ်တွေ၊ဘော်ဒါတွေရဲ့ဆန္ဒကို လေးစားသောမိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ မရရအောင်Raymond အမှတ်တယပြခန်းလေးကိုအကောင်အထည်ဖေါ်သွားပါမည်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်..အလှူငွေတွေရင်မှာပိုက်ဖလန်းဖလန်းထပြီးသုံးမကုန်ဖြုန်းမကုန် အပျော်ကြီး
ပျော်နေကြပြီလို့ မညှာမတာ မထင်မှတ်လိုက်ကြပါနဲ့တွတ်ပီမရှိတော့ကတည်းက မိသားစုဟာ ရှင်လျက်နဲ့သေရတဲ့ဘဝပါ.မငိုကြွေးရတဲ့၊ရင်မကွဲရတဲ့နေ့တစ်နေ့မှမရှိသေးပါ.ခုနေ..တန်ခိုးရှင်တစ်ပါးကလက်ခံရထားတဲ့အလှူငွေတွေတစ်ပြားမကျန်ပြန်ပေးတွတ်ပီကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ကတော့အလှူငွေတွေပြန်ခွဲဝေအပ်နှံပြီးလောကဓံအပေါင်းခါးစည်းခံတွတ်ပီကိုဝမ်းသာအားရWelcome လုပ်ရင်ခွင်ထဲထည့်ထားလိုက်မယ်တွတ်ပီဟာ ခင်မြတ်မွန်အတွက်ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲနိုင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ချစ်လှစွာသောသားပါ.မှန်သောသစ္စာစကားပါ…ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါ။
Previous Article လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ချစ်သူလေးရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းခံလိုက်ရတာကြောင့် ဆွံ့အသွားခဲ့ရတဲ့ သီရိရှင်းသန့်
Next Article သီချင်းတီးလုံးလေးအတိုင်း အမိုက်စားကကွက်များဖြင့် အပီအပြင်ကို ဒွန့်ခါနေတဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်